नीलाम्बर आचार्य भन्छन्– ओलीका कामलाई जनताको स्यावासी हो अहिलेको नतिजा::Pathivara News
नीलाम्बर आचार्य भन्छन्– ओलीका कामलाई जनताको स्यावासी हो अहिलेको नतिजा
राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य नेपाल–भारत प्रवुद्ध समुहका पनि सदस्य हुनुहुन्छ । लामो समय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विताएर स्वतन्त्र जीवनयापन गरेका विश्लेषक आचार्य गत संविधानसभामा संवैधानिक समितिको सभापति समेत हुनुभयो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको नतिजालाई उहाँ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका काम वापत जनताले दिएको स्यावासी वताउनुहुन्छ । निर्वाचन नतिजा र आगामी राजनीतिबारे आचार्यसँग चक्रपथका लागि बिनु पोरखेलले गरेको कुराकानीः
यो चुनावमा एमालेले जुन हैसियत प्राप्त गर्यो के यो अनुमानित थियो ?
एमाले अघि छ । यसले अन्य पार्टीको तुलनामा बढी मत ल्याउँछ भन्ने स्वाभाविक अनुमान थियो । भयो पनि त्यस्तै । कांग्रेसले सरकारमा बसेर एकपछि अर्को गर्दै जनताको मनोकांक्षामा तुषारापात गरेको कुराले उसले जनमत गुमाएको थियो । अहिले जस्तो नतिजा आएको छ, विगतमा पार्टीहरुले खेलेको भूमिकाका आधारमा एकदमै न्यायिक छ, स्वाभाविक छ ।
एमाललेको पक्षमा यति ठूलो जनमत आउनुको कारण चाहिँ के हो ? तपाईंलाई के लाग्छ ?
पहिलो कुरा त एमाले अध्यक्ष ओलीले छोटो समय सरकारको नेतृत्व गर्दा जस्तो भूमिका खेले त्यसप्रति जनताले स्यावासी दिएका हुन् । अहिले एमालेको मात्रै सिटको कुरा होइन, एमालेसँग गठबन्ध्न गरेको माओवादी होस् वा एमालेको चुनाव चिन्ह लिएका वा एमालेले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई मतदाताले छानी छानी भोट दिएको देखियो । यो भोट देशको स्वाभीमान बचाउने र विकासको नयाँ दिशामा लैजाने ओलीको राजनीतिक दिशाका लागि हो । अर्को कुरा, देशमा जनताले स्थायित्व चाहेका छन्, विकास चाहेका छन् । अत्यन्तै कठीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुँदा र बाह्य पक्षको घेराबन्दीमा पर्दा पनि ओलीले विकास र परिवर्तनको सपना देखाए, योजना ल्याए । त्यसो गरेवापत ओलीको सरकारलाई ढालियो । आफ्ना सपनामाथि जसले हमला गर्यो जनताले उसँग बदला लियो र जसले आफ्ना सपना र आकांक्षा पूरा गर्ने बाटो लियो जनताले त्यसलाई अनुमाोदन गरे । अहिलेको निर्वाचन नतिजा मुख्य रुपमा यसैगरी आयो । अनि अर्को कुरा पहिले पहिले चुनावपछि सरकार बनाउने बेलामा तालमेल हुन्थ्यो । तर, अहिले चुनाव अघि नै दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच तालमेल भयो । त्यसले पनि जनतामा उत्साह थप्यो । यिनै कारण हुन् यो पटक एमाले र बाम एकतालाई भोट आउनुको ।
अर्को फ्याक्टर के पनि हो भने एमालेलाई मन पराउनेले पनि एमाललेलाई भोट हाले र कांग्रेस नम नपराउने ले पनि एमालेलाई र बाम गठबन्धनलाई नै भोट हाले । त्यसो गर्नुको विकल्पै भएन । यसरी पनि एमालेले मतान्तर बढायो र कांग्रेसले आजसम्मकै तल्लो स्तरको हार खप्यो । तर अझै पनि कांग्रेस देशको दोस्रो ठूलो पार्टी चाहिँ हो है ।
कांग्रेसले अहिलेसम्मकै लज्जास्पद्र हार खप्यो भन्नु भयो, यसका कारण के थिए ? बताइदिनुस् न ।
हेर्नुस् है, यो कुरा जनजनलाई थाहा छ । म बोल्नै पर्दैन । आइजीपी नियुक्तिको कुरा, लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाभियोग लगाउँदा कांग्रेस लोकमानका पक्षमा उभिएको कुरा, भ्रष्टाचारका मुद्दामा छिटो छिटो फैसला दिएर लोकप्रिय भएकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध कांग्रेसले ल्याएको महाअभियोगको कुरा, यस्ता कुराले कांग्रेसप्रति तीब्र वितृष्णा जगायो । अर्काे कुरा नेपालमाथि त्यत्रो अन्यायपूर्ण नाकाबन्दी लाग्यो, कांग्रेस मौन भयो । अझ केही नेता त नाकाबन्दी लागेकै छैन भन्दै हिंडे । आफैं सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला ल्याएको संविधान विरुद्ध कसैले प्रहार गर्दा कांग्रेस उसैको पक्षमा उभियो, संविधान संशोधन गर्छु भन्दै हिंड्यो । यसै कारण कांग्रेसलाई जनताले भोट दिएनन् ।
अर्काेतिर लामो समयसम्म सरकारमा रहेर पनि जनताको लागि के गरेँ के गरिनँ भन्ने समीक्षा कांग्रेसले कहिल्यै गरेन । चुनावका मुखमा अनावश्यक रुपमा मन्त्रिपरिषद्को विस्तार जस्ता अत्यन्तै आलोचित र अलोकप्रिय काम कांग्रेसले गर्यो । यसरी कांग्रेसले भोट माग्ने आधार नै भएन । तर, अव देशमा कांग्रेसको भूमिका आवश्यक छ । यसअघि पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा कांग्रेसको भूमिका थियो भन्ने भुल्नु हुँदैन ।
कांग्रेसले नसोचेकै ग्याप एमाललेले खडा गर्यो भन्नुभयो, यसका सकारात्मक र नकारात्मक पाटा के छन् ?
पहिलो त एमालेले पाएको यो मतले देशमा स्थायित्व कायम गराउने छ । विधिको शासन लागु हुन्छ । किनभने एउटाले एउटा नियम ल्यायो अनि अर्कोले अर्को बनाउँदा नियम नै लागू हुन पाउँदैनथ्यो । अब त्यस्तो हुँदैन । अव देश समृद्धितिर लम्कन्छ । सबै सकारात्मक हुँदा हुँदै पनि एमालेमा अहंकार जन्मन्छ कि भन्ने डर हुन्छ । यदि त्यो कुरा मात्र ब्यावस्थापन गर्न सके देशले गुमाउने कुरा हुनेछैन ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले नै वामको सरकार भएपछि नेपालमा विदेशी लगानी आउँदैन, विदेशीले पत्याउँदैनन् भन्नु भएको थियो । त्यस्तै पो हुन्छ कि ?
त्यस्तो हुँदैन। कुन पार्टी सरकारमा छ भन्ने आधारमा हैन, सरकारमा बसेका पार्टीले कस्तो नीति बनाउँछन् भन्ने आधारमा विदेशी लगानी आउँने, नआउँने हुन्छ । पूँजीपतिले मेरो पूजी लगानी गर्दा सुरक्षित छ कि छैन, नफा हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्छ । कुन पार्टी आउँछसँग लगानीकर्तालाई मतलव हुँदैन, उनीहरुलाई लगानीको सुरक्षा र नाफाको मतलव हुन्छ । वामको सरकार आएपछि चीन लगानी गर्न तयार भएर बसेको छ । यो विदेसी लगानी हैन ? सुरक्षित हुने भए चीन मात्रै होइन सबै देश आउँछन् लगानी गर्न । बरु यिनले औद्योगिक नीति कस्तो बनाउँछन् ? आर्थिक नीति कस्तो बन्छ ? कुटनीतिक अभ्यास कस्तो गर्छन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।
कांग्रेस आफ्नै एजेण्डाले आफैं कमजोर भयो भन्नुभयो, अव पहिलेकै अवस्थामा पुग्न सम्भव छ ? छ भने त्यसको लागि अब कांग्रेसको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
असम्भव भन्ने कुरा त केही पनि हुँदैन तर, त्यसको लागि तपस्या चाहियो । यो भनेको भूमिका बदलिएको मात्र हो । हिजो एमाले प्रतिपक्षमा रहन्थ्यो आज कांग्रेस आइपुगेको छ । लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ र हुनुपर्छ पनि । यसबाट कांग्रेसले पाठ सिक्दै रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्दै अब बन्ने सरकारले गरेका राम्रो कामको स्वागत र नराम्रो कामको विरोध गर्नुपर्छ । सरकारले गरेका राम्रो काममा अवरोध होइन सहयोग गर्नुपर्छ । राम्रो कामको समर्थन गरेपछि जनतासँग राम्रो सम्बन्ध बन्छ । किनभने जनता त काम भएको विकास भएको हेर्न चाहन्छन् नि । अवरोध भएको हेर्न चाहंदैनन् ।
सरकारमा बसेर राम्रो काम गर्ने अवसर त यसअघि कांग्रेसलाई नै धेरै थियो होइन र ? पटक पटक जनताले कांग्रेसलाई बहुमत दिए ।
हो । त्यहि कुरा कांग्रेसले गर्न सकेन र त यो हालतमा आयो । एमालेले प्रतिपक्षमा रहंदा जनताको अवाज बोल्यो, थोरै समय सरकारमा गएर पनि जनताको काम गर्यो । यसै कारण अहिले भारी मत पायो । अब बन्ने बाम सरकारले जनताका सबै आवज लिएर जान्छ भन्ने छैन । त्यस्ता ठाउँमा कांग्रेस बोल्न सक्नुपर्छ । र गतिलो प्रतिपक्षको भूमिका निभाउन सक्नुपर्छ कांग्रेसले । कांग्रेसले अब कठोर हँुदै आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।
यसरी भोट खसाएका जनता अबको सरकारबाट के चाहन्छन् ?
तपाईंले भनेजस्तो वाम गठबन्धन भएर यति धेरै जितेको होइन । त्यो पहिलो फ्याक्टर हुँदै होइन । यो वाम वा जे भनिए पनि एमालेको जीत हो । उसले लिएका नीति र उसले सरकारको नेतृत्व गर्दा गरेका कामको जीत हो । यो सवै भोट पनि एमालेका एजेण्डा र राजनीतिमा ओलीको सकारात्मक अडानका कारण आएको हो । एमालेका जे अडान थिए त्यसमा एमाले अडिक रहोस् भन्ने चाहान्छन् जनता । बाहिरी शक्तिसँग नझुकोस्, सबै देशसँग वरावरीको सम्बन्ध कायम गरोस् भन्ने चाहन्छन् जनता । अर्को कुरा, जनता देशमा स्थायित्व चाहान्छन् । सँगै विकास चाहान्छन् । भूकम्प, बाढी र भोकमरीले पिल्सिएका जनता त्यसबाट छुट्कारा चाहन्छन् । देशभित्रै रोजगारी चाहन्छन् । एमालेमा अहंकार नपलाओस्, त्यो चाहन्छन् जनता । न्याय मरेको छ देशमा, एमालेले त्यो अन्त्य गरोस् । बनेको गठबन्धनमा फुट नआओस् । जनताले हरेक क्षणको मुल्यांकन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा एमालेसँग गठबन्धनमा रहेको माओवादीले कत्तिको संम्झन्छ त्यसमा पनि यो निर्भर छ । जनता अव काम हेर्न चाहन्छन् ।
मङ्लबार, मंसिर २६, २०७४ मा प्रकाशित